SARY AVY AMIN'NY ALIKA AMERIKANA PIT BULL TERRIER, 4 - ALIKA
Sary avy amin'ny alika amerikana pit Bull Terrier, 4
Alaina ny alika manga any Amerika Pit Bull Terrier amin'ny orona manga eo amin'ny 3 1/2 volana
Alika taloha fianakaviana - ny anarana Irlandey
Rocky ilay alika amerikana Pit Bull Terrier amerikana manga sy fotsy amin'ny 3 1/2 volana
Zanak'alika King Kane the Pit Bull amin'ny 10 1/2 herinandro izao. Manana fahasembanana izy izay misy fihodinan'ny tongotra havanana, saingy tokony hahitsy rehefa mihalehibe izy.
Alika King Kane the Pit Bull amin'ny 10 1/2 herinandro
boston terrier sy anglisy bulldog
Ny haben'ny Pit Bull an'ny olon-dehibe dia mety miovaova be.
'Ity i Tilly, ilay Pitbull Terrier Amerikana mena ahy, 1 taona. Araka ny hitanao amin'ny sariny dia manana tongotra 3 izy ary manana tantara iray. Nilaozana tany am-piasako i Tilly (teknolojia mpitsabo nify amin'ny hopitaly biby aho). Notafihin'ny alika hafa izy tamin'izy 4 volana teo ho eo ary ny tompony teo aloha dia tsy nanana lovia napetraka tao amin'ny tongony toy ny tokony ho izy. Tonga haka azy avy amin'ny asako izy ary nitondra ny rahavavin'i Tilly Pigglett mba hitsangatsangana fotsiny .... Rehefa avy naka azy izy, 30 minitra taty aoriana dia niverina vahiny izy ireo. Ny rahavavin'i Tilly dia nopotehina ny tongotr'i Tilly ary nisy vera tao aminy i Tilly ary nolazaina taminay fa tao anaty kamio izy ireo ary ny tongotry ny rahavaviny niantsona tao anaty motera ny fiara. Indray mandeha monja ny fitsidihan'ny tompony taorian'ny faharavana dia nanome isa sandoka. Tsy niverina nitaky ny alikany intsony izy taorian'izay. Niaina tao amin'ny asako i Tilly hatramin'ny Aogositra 2009. Tsy afaka namela azy ireo hametraka azy aho. Noraisiko tamina taratasy ara-dalàna i Tilly izay manaporofo fa nilaozana izy ary alikako izao. Avy eo dia notapahin'i Tilly ny tongony mba hiaina fiainana ara-dalàna ary manao tsara izy. Nanova tanteraka ny fiainako i Tilly ary tena naneho ahy ny mety ho Pitbull lehibe na eo aza ny lazan'izy ireo ratsy. I Tilly dia porofon'ireto alika ireto manana finiavana mafy sy biby fiompy ao an-trano. '
'Ny Pepper (Pit Bull) ahy dia nodimandry tampoka efa-taona lasa izay ary naratra toy ny namoy ny zanako. Rehefa maty ny zazavavy Pepper dia tsapako tokoa ny fatiantoka, avy nijery fahitalavitra tsy nisy ny zanako vavy namboly mafy tao aoriako nitandrina ny voako malemy, hatramin'ny namerenako ny fandriako tsy nitady ireo toerana mafana, ho an'ireo zanako very ny ondana tsara indrindra ho an'ny rehetra. , ilay ambanin'ny rano mafana pit Pit Pit. Ny Pit Bulls no karazany ratsy laza indrindra eto. Tsy misy tena mahalala ny mahavariana an'ity karazany ity raha tsy hoe notsofin-kafatra tamin'ny olom-pantatra na ny fitiavany izy ireo. Taorian'ny efa-taona ela naniriako ny ho lasa Neny amin'ny Pig Bull (araka ny tiako hiantsoana ireo piggies wiggly) dia hitako ihany ny Nellie. Nellie dia anisan'ny fianakavianay nandritra ny iray volana izao ary ny fitiavana mahazatra ny Pit Bull dia tena nahakivy ahy ary toa nahatsiaro tena ho tsy navela hizara ny tranoko tamin'ny lavaka ela be aho. Ankehitriny isika rehetra dia manonitra ny fotoana very. Milalao fakana, mandeha lavitra , mampianatra ny alikako hendry toy izany foana ny tetika rehetra hitanao ao amin'ny magazay mpampijaly olona. Tena mivoaka ny zazalahy terrier rehefa alika mihaino ianao! Nellie dia tia sy manaiky ny zokiny lahy Doc ( Boardie Collie ) sy Jake (ilay somary lehibe karazana mifangaro ) sy ireo rahavaviny telo tiany indrindra amin'ny karazany (Missy, Baby ary Deuce). Tena miezaka mafy i Nellie mba ho zazavavy kely hajaina, na dia manao fahadisoana aza ianao dia azonao atao ny milaza fa hanao ny tsara indrindra vitany izy amin'ny 'manaraka.' Na ny fitondran-tena mampiahiahy aza dia kely dia kely, tsy toy ny teo alohany, zazavavy Pepper no nitazona ahy tamin'ny rantsan-tongotro nandritra ny roa taona. (Pepper dia nanana faniriana ba kiraro, atin'akanjo ary ondana.) I Nellie dia ho masoivoho miteraka raha maharitra folo taona aho, tena nanolo-tena ho an'ity karazany ity aho ary izaho sy ny kisoa keliko dia hanaparitaka ny fomba mahafinaritra azon'ireto alika ireto , raha mba afaka manala ireo ratsy tompony sy izany isika BSL . Araraoty ny fanekena fa tsy ny karazany! P.S. aza atao rojo vy ny olona ao amin'ny fianakavianao , maharary azy ireo izany. Pit Bull Momma tena faly
'Ity i Angel, Pitbull Terrier vavy 2 taona ahy. Novidiko tamin'ny sakaizako tsy afaka nikarakara azy izy tamin'ny faha-7 volana. Niharihary taminay fa tsy nokarakaraina tsara izy tamin'ny fiandohan'ny fiainany. Araka ny lazain'ny tranokalanao mazava tsara, ny Pitbull Terrier dia mila 'mpitarika matanjaka nefa milamina.' Tena navelany tany ivelany ilay ampahany tony. Rehefa nody tany an-tranony izy dia saro-kenatra sy saro-kenatra tokoa, saingy niaraka tamin'ny fitarihana fonosana kely mahasalama dia nivadika ho fianakaviana mahafinaritra sy mpiara-miasa mahafinaritra izy. Alika mpiambina tena izy. Hanaitra antsika izy rehefa misy olona manakaiky ny vodin-trano ivelan'ny trano nefa miarahaba ny mpitsidika vaovao miaraka amina orona miketrona fantatra amin'ny hoe fitsikiny tongasoa. Hitanay fa tsio-drivotra mahery izy nianatra haingana be ny zava-drehetra manomboka amin'ny fipetrahana, midina, iza ny anarako (miteny), paw, mihodinkodina, ary jereo izany. Tsy tokony hampiofaninay mihitsy izy ho avy, ny toetrany mahatoky matanjaka dia mitazona azy milahatra foana. Tiany ny milalao fetch, tug-o-war ary hide-n-seek. Miaraka amin'ny lalao tug-o-war dia nanangana teny famoahana hatramin'ny voalohany izahay. Miaraka amin'ny fiofanana mitohy izao dia nahazo ny fahaizany mihanika hazo izy, milomano haka izany ary koa misintona in-2 ny lanjany 60 lbs. iSIKA mampihetsi-po azy isan'andro amin'ny diany ary ny fitsidihana ny zaridaina alika ary atsipy manodidina ny baolina. Izy dia tsy manana fahazaran-dratsy ratsy fa tiany fotsiny ny eo amin'ny tavanao sy ny valahany manoroka anao mandra-pahatsapanao ny hoditrao. Miaraka amin'ny fampidirana mety dia afaka manodidina azy, na eo am-pivoahana, miaraka amin'ny alika kely. Manana a Dachshund - Collie afangaro, saka ary biby kely , ( ferrets ary a bunny ) ary salama tsara amin'izy ireo. Angel dia mpilanja Pit Bull Terrier tena voalanjalanja satria manana fiainana milamina sy hita izy. '
'Tangy ity. Izy no alika mianakavy tsara indrindra nananantsika. APBT izy, ary ho an'ireo any ivelany izay manazava azy ireo ho biby masiaka dia mbola tsy nanana mihitsy. Vao avy nankalaza ny faha-15 taona niarahanay mivady izahay ary mbola tsy nieritreritra alika anaty mihitsy akory mandra-pahatonganay an'i Tangy. Manan-janaka 2 izahay, zanakalahy 13 taona ary zazavavy 3 taona. Tangy no sakaizany akaiky indrindra. Ity alika ity dia manana izany rehetra izany, atidoha, brawn ary hatsaran-tarehy. Izy no alika marani-tsaina indrindra nananako. Mora kokoa ny nanamboatra poti-totozy noho ny zanakay vavy 3 taona. Nitondra fifaliana sy fahasambarana betsaka ho an'ny fianakavianay izy ary manantena ny fifaliana sy fitiavana mandritra ny taona maro avy any aminy izahay. P.S. Ho an'izay mihevitra ny hanana APBT, azafady mba zahao amin'ny orgs famonjena any an-toerana. ary mety hamonjy ain'olona fotsiny ianao ary hahatonga ny sakaiza akaiky indrindra mety hananan'ny fianakavianao. '
Hannah the Pit Bull amin'ny taona 1
'Ity alika tsara tarehy ity dia i Layla. Pit Bull 2 ​​taona izy. Nisalasala ny hahazo Pit Bull aho fa ankehitriny manana ny iray izao, tsy misy karazany hafa tadiaviko. Layla dia alika mahatoky sy be fitiavana tokoa. Ham dia be izy izay tia mampifaly ny rehetra. Mitsikitsiky foana ho an'ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviako izy. Ity karazana ity dia manana laza mahatsiravina toy ny biby mahery setra, raha ny marina dia tsy izy. Ity fihetsika ity dia tokony homena tsiny amin'ny tompony fotsiny. Aza adino fa tsy misy alika ratsy, tompona ratsy fotsiny !!!! ”
'Ity dia Snoop Dog sy Luci, samy Pit Bull Terriers. Snoop dia mena ary fotsy ary orona mena sôkôla i Luci. Snoop dia 3 taona ary Luci dia 1 taona amin'ity sary ity. '
Araka ny hitanao, Snoop Dog sy Luci ovy be fandriana ...
sarin'ny lavaka manga
Manakorontana puppy Pit Bull Terrier amin'ny volana 3
Manakorontana puppy Pit Bull Terrier amin'ny 6 volana
'Ity i Bunky, zanako Pitbull efa-bolana. Mipetraka any Arzantina izahay, firenena izay mbola fahita matetika ny ady alika, ary noho izany dia ady tsy tapaka amin'ireo mpifanila vodirindrina sy fianakaviana eo an-toerana izay manavakavaka mafy an'io karazana mahafinaritra io. Maro amin'izy ireo no gaga nahita azy nilalao tamin'ny zanakavavin'ny namako akaiky indrindra 3 taona, na ny zafikeliko vavy 9 taona. Nosintomin'izy ireo ny sofiny, nalainy ny sakafo avy any aminy ary sahirana hatrany izy ireo amin'ny fampakarana azy, tsy asa mora satria milanja 10 kg izao! Tratrako mihitsy aza ny zanako vavy nametraka ny saribakoliny taminy ny andro hafa! Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mino marina fa io alika 'mampidi-doza' io dia mety hahazaka be loatra ary miady hevitra matetika amin'ireo olona mahita antsika amin'ny anay. mandeha isan'andro , manandrana manazava fa tsy misy izany antsoina hoe alika ratsy, tompona ratsy fotsiny. Tiany ny milalao amin'ireo alika hafa ao amin'ny valan-javaboary ary ankehitriny fantatry ny sasany amin'ireo mpandeha alika hafa izy ireo dia faly avelany hilalao. Bunky dia mankafy ny rahavaviny Nina izay dimy volana Mpiandry Belzika . Tsy azoko tsara ny fitsarana an-tendrony ananan'ny olona amin'ity karazana mahafinaritra ity, tsy ho irery aho ary handeha hiaraka amiko izy. '
'Ity no Pit Bull Rocky antsika. Izaho sy ny vadiko dia naka azy tamin'ny kilao tokony ho 3 taona lasa izay. Izy no alika be fitiavana, malina ary tia olona. Tsy afaka nangataka namana tsara kokoa aho. Tena tia matory eo am-pandriantsika i Rocky ary misolelaka mandritra ny alina. Naleviny tao ambany fonony ny orony mba hafana. Tiany ny milalao miaraka amin'ireo namany alika. Rehefa eo akaikin'ny zokiny sy ny ankizy izy dia toy ny hoe fantany fa mila malemy fanahy (izay izy na izany aza)! Rocky dia tia hetsika, fa aleony miala sasatra eo amin'ny sezalava na ny fandriany ary mijery fahitalavitra miaraka amin'i Neny sy i Dada. Ny vadiko dia nampiofana an'i Rocky tamin'ny fampiasana ny teknikan'i Cesar Millan ary azoko lazaina avy amin'ny foko fa i Rocky dia alika tony sy manoa izay mahalala ny fetrany sy ny fetrany. Aorian'ny fananana an'i Rocky ao amin'ny fianakavianay dia tsy hanana alika hafa intsony izahay ary haka ny Pitbulls anay hatrany amin'ny kilao mba hahazoana antoka fa voavonjy ny aina. '
Rocky the Bull Bull
Angel, ilay Pit Amerikanina Pit Bull Terrier sy tera-tany amerikana 2 taona ary Wizzy ilay brindle sy Pit Pit fotsy 4 taona - ovy fandriana ihany koa izy ireo! Mandria am-piadanana, Wizzy.
Nala, ilay Pit Bull amerikana sambatra indrindra ao! Tiany daholo ary mino ny olon-drehetra tia azy.
Nala the American Pit Bull amin'ny maha alika kely azy
Nala the Pit Bull amin'ny maha alika kely azy
'Adinoy ireo rafitra fiarovana sarotra! Mahatsiaro ho voaro isika miaraka amin'ny rafitra Petey / Nala .'— Amerikanina Pit Bull Terriers Petey sy Nala, izay mipetraka miaraka amin'i a Chihuahua 6-kilao, Chico , iza no mifehy ny trano. Eny, ny Chihuahua no sefon'ny Pits!
Labrador sy ny Chow Chow Mix
labradoodle labrador bebe kokoa noho ny poodle
tariby volo kilalao amboahaolo terrier
kilalao fiainana miandry mpiandry aostraliana